Maraykanku ma ka war hayaan cidda ay ku waxyeeleeyaan Duqaymaha ay ka gaystaan Soomaalia,? – Hornafrik Media Network
Maraykanku ma ka war hayaan cidda ay ku waxyeeleeyaan Duqaymaha ay ka gaystaan Soomaalia,?
By HornAfrik	 On May 8, 2019
MOGADISHU—Ibrahim Xiireey waxa uu ku soo soo laabanayay Muqdisho, isagoo wata gaarisgiisa, ayna la socdaan 2 Saaxibadiis ah 18 kii March markii ay Gaarigiisa ku dhufteen Gantaal Diyaaradaha Maraykanka.
Xiireey markii duqaynta lagu dilayay waxa uu ka soo laabtay Tuuladda Muuri, isagoo soo kormeerayay Beer ay halkaasi ku lahaayeen Qoyskiisu, waxaa la saarnaa Gaariga 2 Saaxibadiis ah, mid isla goobta ayeey ku wada dhinteen, halka midka kalana uu Isbitaalka ku geeriyooday.
Warsaxaafadeed ay soo saareen Taliska Ciidanka Maraykanka ee Afrika maalinkii xigtay waxay ku sheegeen in weerarka ujeedkiisu ahaa in lagu wiiqo Kooxda Alshabaab, laguna hor istaago qorshayaasha ay Maleeshiyaadka cusub uga qoranayaan Gobalka.
“Waqtigan, waxaa lagu dilay weerarka 3 Argagixiso ah,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Laakiin baaris ay samaysay GUNGAAR oo ah Warbaahin ka faaloota Argagixisadda waxay ogaatay in Xiireey iyo Labada qof ee la dhintay in midkoodna uusan xiriir la lahayn Argagixiso, isla markaan loo bartilmaameedsaday si qalad ah.
Dhimashadda 3 dan qof waxay kordhinaysaa tiradda Dadka Shacabka ee ku waxyeeloobay Duqaymaha Maraykanka, intii uu xukunka hayay Donald Trump-Madaxwaynaha Maraykanka, Waxaana muuqanaysa in Duqaymaha Maraykanka ka hor inta aan la fulin in Xog fiican aysan aruurin Taliska AFRICOM ee fuliya duqaymaha, sidaas oo kalana Duqaymaha kadib aysan soo aruurin Macluumaadka ku aadan khasaaraha ay duqaymuhu gaysteen iyo cidda la bartilmaameedsaday. Waxaana shaki la galinayaan in duqaymuhu ay yihiin kuwa bartilmaameed sax ah lala eegto, marka loo eego Macluumaadka Sirdoon ee ay adeegsadaan oo aan ahayn kuwo ku filan in Duqaymo lagu jaan gooyo.
Ibraahim Xiireey waxa uu maamulayay Hanti ay Qoyskiisu lahaayeen oo isugu jirtay Dukaamo, Kaalimo Shidaal iyo Ganacsiyo kale, Waxa uu daganaa Muqdisho oo si fudud looga qaban karay, iyadoo aan Diyaarado dagaal loo kicin in lagu duqeeyo. Waxaana uu ahaa Aabbe leh 7 Caruur ah, siday Eheladiisu u xaqiijiyeen GUNGAAR
Warsaxaafadeedka AFRICOM ee soo baxay maalin kadib duqaynta waxaa lagu sheegay inay ka warhayaan eedaymaha la xiriira in duqaynta ay suuragal tahay in Dad Rayid , waxayna sheegeen inay baarayaan sax ahaanshaha eedaymahaasi, iyagoo qiimayn doona xog kasta oo arrintan la xiriirta.
GUNGAAR waxay ogaatay 7 Usbuuc kadib duqayntan inaysan illaa iyo hadda Maraykanku wax xiriir ah la samayn Eheladda Dadkii ay duqaynta ku dileen.
Afhayeenka AFRICOM, John Manley oo ay la xiriirtay GUNGAAR waxa uu ku dooday inay wali socoto baaristu, ayna dhici karto inay Usbuucyo kale qaadato, Wuxuuna kadib na waydiistay haddii aan ka caawin karno Qoysaska Dadka duqaymaha ay ku dileen Taleefoonadooda.
Mar aan waydiinay siday ku aqoonsadaan qofka ay bartilmaameedsanayaan inuu yahay Alshabaab iyo in kale waxa uu sheegay inay isticmaalaan Xogo Sirdoon iyo habab kala duwan, taasoo aan ku go’aansano weeraradeena cadowga aan la beegsano, mana ahan in nooca ay yihiin Xogaha iyo hababka aan marno inaan idinkala doodno,” ayuu ku yiri Afhayeen Manley warbaahinta GUNGAAR.
Shirka Madaxda ee Garoowe oo hakad ku jira iyo sababta.
Saraakiil Shabaab ka tirsanaa oo Jubada Dhexe lagu dilay.